akangwara musha pcb - China Fastpcba Technology
Tinobatsira nyika kukura kubva 1983
Support Call pcba19@pcb-smt.net
maindasitiri kushandisa michina
Safety uye Protection
Safety uye Protection Soft bhodhi
simba kukurukurirana pcb
maindasitiri kushandisa michina akatungamirira
akangwara musha pcb
FASTPCBA Technology Co., Ltd ari nyanzvi pcb mugadziri muna China, Shenzhen. With makore 14 okukura, FASPCBA ichichinja rokutanga kirasi akaigadzira HDI pcb, pamwe kugadzirwa kugona 35,000 mativi mamita. FASTPCBA ari kupa yepamusoro pachena basa pcb uye pcb gungano, kusanganisira zvinoumba sourcing, basa bvunzo, conformal unhani uye ungano zvakakwana nokuda nemakasitoma rose. bhizimisi redu hasha urongwa hunotibatsira anunure yakakwirira yemakwikwi basa redu ...
FASTPCBA Technology Co., Ltd ari nyanzvi pcb mugadziri muna China, Shenzhen. With makore 14 okukura, FASPCBA ichichinja rokutanga kirasi akaigadzira HDI pcb, pamwe kugadzirwa kugona 35,000 mativi mamita. FASTPCBA ari kupa yepamusoro pachena basa pcb uye pcb gungano, kusanganisira zvinoumba sourcing, basa bvunzo, conformal unhani uye ungano zvakakwana nokuda nemakasitoma rose.
Bhizimisi redu hasha urongwa hunotibatsira anunure yakakwirira yemakwikwi mabasa edu siyana, makwikwi mutengi chawo. Kuburikidza nzira iyi, tinokwanisa kuita kutsanya, zvisarudzo anonzwisisa pakupindura kuchinja kumusika mamiriro nokusika kukoshesa uye kubatsira vatengi.
Kana Service, isu kupa 7days 24hours paInternet nyanzvi Pre-sale, Nokutengesa uye Azoridzidza-Sale basa kugadzirisa mubvunzo upi pamusoro murayiro. Chero nguva, zvinodiwa achawana Kukurumidza Reply redu vakanyatsodzidziswa uye ushamwari rutsigiro netsvimbo.
Musika yedu chikuru ndiro Europe, North USA, Australia, South America, uye Asia. tichaisa zvakawanda nesimba kuvaka nezvichaitika zvakawanda vatengi vari zvakawanda munharaunda. All tinoda kuita, ndizvo kubatanidza nyika zvinhu zvedu, kugovana Kukosha, Happyness uye kubudirira yakawanda vatengi.
Pcb uye SMT ungano pamwe chete-vanorega basa
FR4, mukuru TG FR4, mukuru kakawanda, alum, FPC
Min.thickness nokuti yomukati akaturikidzana
(Cu ukobvu havachafaniri)
Kukotamira uye kumonyanisa
Rokunze cú uremu
Inner cú uremu
PTH mugomba kubvumidza
NPTH mugomba kubvumidza
Green, chena, dema, tsvuku, zvitema ...
chena, dema, yero, zvitema ...
100% Functional bvunzo
X-ray Chrono Test, Functional bvunzo
Kubvumidza kuti pcb
Max Ukuru kupera bhodhi
HASL, ENIG, kunyudza sirivha, kunyudza netini, OSP ...
pcb pepa rehurukuro
Square, denderedzwa, kwemashifiti (pamwe jigs)
Plastic, simbi, nechidzitiro
Q1: Chii basa wei?
FASTPCBA: We zvinopa turnkey mhinduro kusanganisira pcb nhema SMT, epurasitiki jekiseni & simbi, chokupedzisira gungano, yokuedzwa uye mamwe basa rinokosha-vakawedzera.
FASTPCBA: pcb / PCBA Our mabasa zvikurukuru nokuda maindasitiri kusanganisira Medical, Automotive, Communication.
Q4: Tinogona kuongorora unhu panguva kugadzirwa?
FASTPCBA: Hongu, tiri yakazaruka uye yakajeka pamusoro mumwe kugadzirwa muitiro vasina kuzvivanza. Tinogamuchira mutengi ndiongorore yedu kugadzirwa kwacho uye tarisa mumba.
FASTPCBA: Tiri kuda kusaina nda kushanda kubudikidza mutengi divi mutemo omunharaunda uye zvinovimbisa kuchengeta vatengi mashoko pamatunhu zvakavanzika chechetere.
FASTPCBA: Nokuti pcb mashoko, tapota kupa Gerber date / mafaira uye chinoratidza chokuita michina zvinodiwa uyewo upi chaiwo chinodiwa kana uine.
Nokuti PCBA mashoko, tapota kupa Gerber date / mafaira uyewo BOM (rugwaro nezvinhu), uye kana uchida kuti tiite basa bvunzo, ndapota uyewo kupa bvunzo kurairirwa / nzira.
FASTPCBA: Delivery Tichitevera EXW, FCA, FOB, DDU etc. vose iripo kwakavakirwa mumwe mazwi.
FASTPCBA: Kazhinji maawa 24 kusvika maawa 48 achangogara kugamuchira womukati injiniya vanoongorora chisimbiso.
FASTPCBA: Kwete, hatina MOQ zvinodiwa, tinogona kutsigira zvirongwa zvenyu kubvira prototypes kune vakawanda nezvinobvamo.
Previous: zvokurapa Electronics pcb
Next: maindasitiri kushandisa michina pcb
2 rukoko pcb
6 rukoko pcb
Bare pcb Manufacturing
Cheap pcb nhema
China pcb Assembly Online Quote
China pcb kumumvuri
Fast pcb kumumvuri
Flex pcb kumumvuri
Tefa pcb Board
Tefa pcb Design
Tefa pcb Manufacturer
Tefa pcb kumumvuri
Free pcb marongerwo
Free pcb marongerwo Software
Home pcb nhema
Akatungamirira pcb Assembly
Multi rukoko pcb
Multilayer pcb nhema
Online pcb nhema
Order pcb With zvinoriumba
PCB Assembly And Valve Work
PCB Assembly yechigarire
PCB Assembly Process Matanho
PCB Assembly Valve Work
PCB Board marongerwo
PCB Board nokutengesa
PCB Board ukobvu
PCB zvinoriumba Assembly
PCB Contract Assembly
PCB Assembly nhema
PCB azoshandiswa China
PCB azoshandiswa Notes
PCB marongerwo Services
PCB Manufacturing nezvaanogona
PCB Manufacturing Factory
PCB Manufacturing Kit
PCB kumumvuri And Assembly
PCB kumumvuri China
Pcba Manufacturing Process
Nevakabva pcb Manufacturers
Quick pcb kumumvuri
Quick Dzokai pcb nhema
Quick Tendeukai pcb Prototypes
Nokukurumidza pcb Prototyping
RF pcb marongerwo
Single rukoko pcb
Smt pcb Manufacturing Process
Chii pcb Assembly
Chii pcb Design
Chii pcb Manufacturing
akangwara musha Soft bhodhi
musha akangwara akatungamirira
template Uyu micro niche zvebhizimisi Categories, kureva Petro - Industrial HTML Template. paiva nekumwisa template iyi kushandisa HTML / CSS.
Ndezvipi zvinhu zvine chokuita PCBA zvakaipa ...
Ndezvipi mitemo pcb marongerwo mu t ...
Rinhiko ndiye SMT zvakadzokororwa kutenderera kuti t ...